Fitbit dia nanambara ny Ionic, famantaranandro maranitra izay mikendry ny handresy ny Apple Watch | Androidsis
Vao tsy ela akory izay i Fitbit dia nanambara ny Ionic, ny smartwatch feno voalohany an'ny orinasa izay misy ny fiasa rehetra hamaranana ny Apple Watch, ao anatin'izany ny rafitra fiasanao manokana, sehatra fampiharana, fanohanana fampiofanana marobe, modely GPS ary fanohanana Notifications.
Na dia raha vao jerena dia toa izany ny Ionic dia kinova fanatsarana ny Fitbit Blaze amin'ny lafiny famolavolana azy, nilaza ny orinasa fa nitodika tany amin'ny haitao avo lenta izy io mba hamoronana ny rafitry ny smartwatch, ao anatin'izany ny a Teknolojia Nano Molding, izay ampiasaina amin'ny finday avo lenta premium amin'izao fotoana izao hanambarana fitaovana roa.
Amin'ny tranga Ionic, Fitbit dia nanisy plastika sy alimika tao amin'ilay tranga, izay ahitanay koa ny ankamaroan'ny sensor izay antenainao avy amin'ny smartwatch avo lenta, toy ny GPS, Bluetooth ary Wi-Fi. Ny Fitbit Ionic koa tsy tantera-drano ary manolotra maody filomanosana izy io, saingy ity dia singa nalaza ho an'ny gadget vaovao an'ny orinasa.
1 Kitendry fikitika sy fanaraha-maso ny tahan'ny fo
2 Fitbit OS
Kitendry fikitika sy fanaraha-maso ny tahan'ny fo
Ny smartwatch dia misy loko telo samy hafa, manokana volafotsy, volondavenona ary volomboasary, ary na dia ho azon'ny mpiserasera ifanakalo aza ireo tarika, ho sarotra ny mahita azy ireo raha jerena fa nitady rafitra vaovao sy tena izy i Fitbit, toa ny nataon'i Apple tamin'ny Apple Watch. Amin'izao dia misy maodely roa tarika, fanatanjahan-tena iray, vita amin'ny silicone, ary iray hafa amin'ny hoditra.
Fitbit dia tsy nanome tsipiriany momba ilay touchscreen, fa misy a Famirapiratana 1000 nit, vita amin'ny vera miaraka amin'ny firakotra Corning Gorilla Glass ary miloko, mba ho hita eo amin'ny efijery na dia amin'ny tara-masoandro mivantana aza ny fampahalalana. Ity dia anjara asa lehibe indrindra ho an'ireo mpihazakazaka sy bisikileta.
Ankoatr'izay, ny gadget dia misy a kinova nohavaozina tamin'ny sensor an'ny tahan'ny fo PurePulse, izay toa manome mazava tsara kokoa, miaraka amin'ny SpO2 sensor handrefesana ny ôksizena ao anaty ra izy io ary mety hahafantatra ireo fepetra ho avy izay hitranga amin'ity masontsivana ity.
Ny iray amin'ireo zava-dehibe indrindra momba ny Ionic dia ny fiatrehany ny rafitra fiasa antsoina hoe azy Fitbit OS, miorina amin'ny sehatra novolavolain'i vatokilonjy, orinasa iray nalain'ny Fitbit tamin'ny taon-dasa. Ny mpamorona dia afaka mamorona fampiharana afaka mampiasa sensor rehetra, fampiharana izay azo apetraka mora foana amin'ny alàlan'ny Fitbit App Gallery.
Ho tonga ny fitaovana miaraka amina fampiharana efa napetraka mialoha, ao anatin'izany AccuWeather, Strava, Starbucks ary Pandora. Ho fanampin'izay, hisy ihany koa ny fanohanan'ny fampandrenesana amin'ny alàlan'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, na dia tsy ho afaka mamafa azy ireo amin'ny finday aza ireo mpampiasa na mamaly amin'ny mailaka, ohatra.
Farany, ny sensor NFC misy ihany koa ary hampiasa serivisy fandoavam-bola vaovao antsoina Fitbit Pay, ary nilaza ilay orinasa fa efa miara-miasa amin'ny mpiara-miasa marobe, ao anatin'izany ny MasterCard sy Visa hahafahan'ireo mpampiasa Ionic mandoa vola amin'ny alàlan'ny smartwatches-ny.
Ankoatra ny zavatra hafa, ny Fitbit Ionic koa hifandray ho azy amin'ny sofina tsy misy tariby fitbit Flyer, na fitaovana hafa misy rafitra Bluetooth, handrefesana ny halaviran'ny dia sy ny isan'ny dingana, ny fahazarana matory ary ny haavon'ny toe-batana ankapobeny. Mandritra izany fotoana izany dia nanambara ny orinasa fa hanomboka a fiaraha-miasa amin'i Adidas amin'ny taona 2018, rehefa hamidy ny fanontana voafetra ny Ionic, miaraka amin'ny programa fanofanana natokana. Raha toa mahazatra anao io hevitra io dia mety hampatsiahy anao ny andro niarahan'i Nike niaraka tamin'i Apple ho an'ny iPod, tao anatin'ny fifanarahana izay notazonina nandritra ny taona maro.
Ary koa, amin'ny taona 2018, Fitbit dia mampanantena ny hanome mpampiasa fivoriana fampianarana audio, tanterahin'ireo mpampiofana matihanina, miaraka amin'ny tanjona hanatsara ny fiaretana sy ny hafainganana mandritra ny fiofanana ara-batana. Fantatsika amin'izany izay mpijery lehibe indrindra an'ny Fitbit Ionic: olona liana amin'ny fahasalamana, satria ny tsenan'ny famantaranandro marani-tsaina dia zaraina tsara eo anelanelan'ny Apple, Samsung ary ireo orinasa hafa te-hanao zavatra amin'ny Android Wear.
Ny Fitbit Ionic dia hamidy amin'ny volana oktobra amin'ny vidiny 350 eurosNa dia hamidy misaraka aza ny tarika fanatanjahantena amin'ny vidiny 30 euro. Ny bandy hoditra dia ho hita manodidina ny 60 Euro ihany koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Fitbit dia nanambara ny Ionic, famantaranandro maranitra izay mikendry ny handresy ny Apple Watch
Ity no fantatsika momba ny Huawei Mate 10 ho avy
Vidio LEAGOO KIICAA MIX latsaky ny 60 euro miaraka amin'ny fihenam-bidy 50%!